Hydroponics | December 2019
Horumarinta pepino: beeritaanka iyo daryeellidda digaag-duurka
Ugu Weyn Ee Hydroponics
Waa maxay hidroponics, sida loo koro strawberries oo aan lahayn ciidda
Nidaamka dhirta sii kordhaya iyada oo loo marayo hidroponics - ayaa loo yaqaan muddo dheer. Tusaalooyinka ugu horreeya ee hidde-yaqaannada waxaa loo yaqaan "Beeraha Daararka" ee Baabuloon iyo beeraha caleenta ah, kuwaas oo la abuuray xilligii Moorish Aztec. Maxay tahay hidroponics? Muxuu yahay hidroponics? Hydroponics waa dariiq si ay u koraan cagaarka, khudaarta iyo miraha aan lahayn ciid.
Heer-jecel yahay cherry leh shakhsi dhalaalaya - fasalka Podbelskaya
Wax dhibaato ah kuma jiri doonto naaskaaga Brahma Paleva
Cinabyo dhir udgoon iyo dhadhan fiican leh "Beauty Beams"
Waxyaabaha dabiiciga ah ee Ruushku waxay leeyihiin calaamad gaar ah
Sharaxaad faahfaahsan iyo sifooyinka beeritaanka ee dabacasaha kala duwan Abaco
Riyooyinka mulkiilayaasha badan ee guryaha xayawaanka ah ama guryaha gaarka ah waa wabiyo leh biyo. Qurxinta noocan oo kale ah waxay isla markiiba isbedeshaa oo dib usoo celisaa goobta, waxay ku darsataa sabiibta, waxayna soo cusbooneysiisaa maalmo kulul. Dhirta qurxinta waxay noqon kartaa mid aad u yar waxayna ku haboontahay xittaa aag kooban. Dhismuhu waxa uu fududaa marka loo eego: Si loo abuuro dhisme leh gacmaheenna, waxaad u baahan doontaa inaad soo iibsato qalab dhismo ah oo si dhab ah u raaco talooyinka naga siiya. Read More
Geedka dhirta: xeerarka beeraha iyo daryeelka
Qosolka dhabta ah ee bannaanka u - Shaaha Chinese "Alenushka"
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Hydroponics 2019